Real estate – Sale - သုမနလမ်းမ၊ Mini Condo ရောင်းမည် | Free classifieds ads | Myanmar marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: သုမနလမ်းမ၊ Mini Condo ရောင်းမည်
သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊(၁၆)ရပ်ကွက် သုမနလမ်းမ၊ Mini Condo ရောင်းမည် အကျယ်အဝန်း(18´×54´), Lift. 7-Floor, 1-Bedroom. တိုက်သစ်၊ စျေးနီး၊ ကျောင်းနီး။ စျေးနှုန်း _ ၇၅၀သိန်း 09-752 7575 47. 09-250 998 522. 09-340 185 131.